အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
[Unicode] အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အဆောက်အဦ ဖြိုဖျက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၌ အဆောက်အအုံ ဖျက်သိမ်းခွင့် ဦးစွာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ...
[Unicode] ရန်ကုန်တွင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းသည် မြေကိုပိုင်ဆိုင်မှုမပါဝင်၍ မြေပိုင်ရှင်၏ မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မြေပိုင်ရှင်အား မြေငှားရမ်းခပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်ထရိုက်တာထံမှ ဝယ်ယူခြင်း၊ မြေရှင်ထံမှ...
နိုင်ငံခြားသားပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
[Unicode] မြန်မာနိုင်ငံသည် ခေတ်ကာလ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်အလျောက် နိုင်ငံတော်အတွင်းတည်ရှိသော မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းအရပ်ရပ်တို့ကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားတို့သည် နေထိုင်အသုံးပြုခွင့်များ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိလာပါသည်။ ထို့ကြောင့်...
[Unicode] သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း။ .. ကျေးဇူးတော်ရှင်သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရား၏ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင် လုပ်ဆောင်ချက်- (၁) နံနက်အိပ်ယာထသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မျက်နှာသစ်ကာ...
လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား ?
[Unicode] ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နည်းဥပဒေမှာ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်းကို လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ စာဖြင့်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဟု...
စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်
### Unicode Version ### “မိမိနေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် မြေရှင်ရဲ့ သဘောတူညီချက် လိုတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ”ဟု စာရေးသူထံ မိတ် ဆွေတစ်ဦးက လာရောက်ဆွေးနွေးပါသည်။ “ဘယ်အပိုင်းကို ပြင်ဆင်ချင်တာလဲ။ မိမိနေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းကို ဆေးသုတ်မယ်၊...
တစ်နိုင်တစ်ပိုင် " မြေ နဲ့အိမ် " ဝယ်ရအောင်
[Unicode] လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြရတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ အခြေအနေအချိန်အခါအရ ဘဝအမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားကြတယ်။ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေအရ ဖြစ်ချင်တာထက်၊ ဖြစ်သင့်တာက...
မိဘပိုင် “ မြေ ” ကို သားသမီးအမည်နဲ့ ဂရန်မြေ လုပ်ခဲ့မိလို့.......
[Unicode] စာရေးသူရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ “ အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်စာချုပ်စာတမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ” လို့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ “ လွှတ်တော်ရှေ့နေမောင်ကောင်းဖေ ” ထုတ်ဝေပြီးသော အိမ်ခြံမြေစာအုပ်များကိုလည်း...
မြေပုံမြေရာဇဝင် ကူးရာတွင် လျှောက်ထားနိုင်သူများ
[Unicode]  ဂရန် (သို့) မြေပိုင်မြေအမည်ပေါက်သူ  မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူ  အမွေဆက်ခံသူများနှင့်  တရားရုံးအမိန့်ဒီကရီ ရရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သူများ မြေပုံရာဇဝင် လျှောက်ထားခြင်း (က) ခင်ပွန်း (သို့)...
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များဖော်ပြခြင်း
[Unicode] ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။ (က) စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံကို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် မိမိ၏မူလ အချိုးသင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအစုတန်ဖိုးအလိုက်...
Copyright © 2020 Aye Chan Myay Real Estate Co.,Ldt. - Aye Chan Myay Real Estate Co.,Ldt.